I-Arsenal ithokozile ngomdlalo wamanqamu wangoMgqibelo we-Heads Up FA - teles
I-Arsenal ithokozile ngomdlalo wamanqamu wangoMgqibelo we-Heads Up FA uma ibhekene neChelsea ngoba abadlali bafuna "ukonga isizini yethu" kusho u-Alexandre Lacazette.
AmaGunners, asephumelele irekhodi lamaNdebe e-13 E-FA, aqede ayisishiyagalombili kuPremier League futhi ngeke ayilungele i-Europa League uma elahlekelwa yiWembley.
"Silahlekelwe yizinhloso zethu ezimbalwa," kusho umgadli waseFrance uLacazette, 29.
UMikel Arteta weArsenal noFrank Lampard weChelsea bobabili bahlose ukuzuza izicoco zokuqala njengabaphathi.
ULacazette wanezela: “Kube unyaka ongaxakile. Sibe nokuma isikhathi eside, sashintsha abaphathi [u-Arteta wangena esikhundleni sika-Unai Emery ngoDisemba], sinabadlali abahlukile.
“Kwakuyisikhathi esinzima, mhlawumbe ebinzima kakhulu emsebenzini wami, kodwa ngiyazi ukuthi ngifunde okuningi. Indebe ye-FA isho lukhulu. Ngize e-Arsenal ukuwina izicoco. "
Ngaleso sikhathi, umphathi weBlues uLampard usekele owinile uWillie ukukhiqiza omunye umdlalo omnandi kakhulu kumdlalo wokugcina ngaphambi kokuthi isivumelwano saseBrazil siphele.
“Ubenesifiso esihle kithi. Ube nesimanga kule sizini - ukhombise isimo sengqondo esifanele, ”kusho uLampard.
"Ngakho-ke bengingeke ngilindele okuncane kunalokho asekhonjisiwe, futhi lokho kunguWillie kuwe."
UFrank Lampard, uDidier Drogba noRoberto di Matteo - Amagoli amahle aqede kowamanqamu weCFAFA Cup yaseChelsea
Umvikeli we-Arsenal, uHector Bellerin uphuthelwe wukuwina kweWatford njengendlela yokuvikela ithole eliqinile, kepha usebuyele ekuqeqesheni leli sonto.
ICedric Soares iboshelwe le ndebe, kanti uCalum Chambers, uPablo Mari, uSkodran Mustafi noGabriel Martinelli basala eceleni.
Izithandani ezinamandla zeChelsea i-N'Golo Kante noWillie bobabili basesigangeni ngemuva kokulimala.
Kodwa-ke, uRuben Loftus-Cheek uthole ukulimala okuncane kokuqeqeshwa ngoLwesine futhi wakhishwa.
UCazorla, uParlor noSanchez - Amagoli amahle kakhulu e-Arsenal kowamanqamu we -FA Cup
AMANOTHI OKUSUKA EMBULWINI WE-MOTD
@Guymowbray: Umdlalo wamanqamu weNdebe Yomhlaba yango-139 kuzoba wona owenza umlando, wohlobo olungafunwa muntu.
I-Wembley engenazo izixuku kuma-semi final bekuyinto engajwayelekile, kepha ngabe ukhona umuntu ozoba khona emcimbini waminyaka yonke womdlalo wethu? Kuyisigaba esisha sonke.
Ama-FA enze konke okusemandleni ukwenza isiqiniseko sokuthi zihlala zikhethekile, kusuka ezinsizakalweni ze-Abide With Me (ezirekhodwe ngaphambili ngu-Emeli Sande ophahleni lwenkundla) ziye kumdlalo olandelwayo wokudicilelwa nezindondo, kepha akunakugwenywa ukuthi usuku selunqobile anginayo injabulo efanayo nenjabulo efanayo.
Okungenani singakulindela kusuka kumdlalo, umdlalo olinganiselwe ngisho phakathi kwamaklabhu ahlelwe a ukuphela kokuzijabulisa ngempela eminyakeni emithathu edlule.
Kufanele nakanjani kusondele ukwedlula i isiphetho ngesizini edlule ye-Europa League kubo bobabili, akungabazeki ukuthi i-Arsenal yathuthuka ngaphansi kweMikel Arteta - izama ukulandela uGeorge Graham ukuthi adlale futhi aphathe iqembu eliwina iGunners Cup.
UFrank Lampard angaba ngowesithathu ukwenza lokhu kuChelsea (ngemuva kukaGianluca Vialli noRoberto Di Matteo), benethuba lokufaka isicoco somdlalo wokuvula isizini yokuqala ophethe okwedlula okulindelwe okuyikho.
Ngiyethemba umncintiswano uzokwenza lokho futhi, ukuqeda isizini ende kunazo zonke, ebusayo kunazo zonke ngesimo sokumamatheka okungenani.
Ukuboleka umugqa ovela evesini lokugcina le-Abide With Me - “Khanyisa ebumnyameni ungikhombise amazulu”.
Ngokungafani ne-final yonyaka ophelile phakathi kweManchester City neWatford, lo mdlalo kunzima kakhulu ukuwubiza.
Okokuqala, kuzoba isikhathi esihluke kakhulu. Manje sesiyazi ukuthi ibhola elivalwe ngeminyango liyamangaza, kepha kuzobe kungumdlalo oyinqaba kakhulu.
Kungumdlalo wamanqamu weNdebe ye-FA, nomdlalo we-derby futhi, kodwa akunjalo. Abalandeli baseseyingxenye ebaluleke kakhulu ebholeni, kodwa lokho kuyanda kakhulu uma kukhulunywa ngezikhathi lapho uwina izinto. Ngaphandle kwabo eWembley ngeke nje kufane.
Ngisalindele umdlalo omuhle, noma kunjalo, futhi yi-Arsenal engicabanga ukuthi izofika ngaphambi kwakhe.
Lokho akusho ukuthi iChelsea nayo ayinabungozi. Ngizwa sengathi i-Arsenal inesibindi nokuzethemba ngokwengeziwe njengamanje, kodwa uma kungenjalo kunzima ukuhlukanisa la maqembu womabili.
Ukuqagela kukaLawro ngokumelene noJosh Franceschi noWillie J Healey
UDave Sexton wabaholela enkazimulweni yeNdebe Yomjaho yeNdebe yoMhlaba yango-1971. Umuntu ongumNgisi wokugcina ukuphatha iChelsea kowamanqamu wendebe enkulu kwaba nguGlenn Hoddle ku-1994FA Cup, wehlulwa yiManchester United.
Ikhanda kuya ekhanda
I-Arsenal iwine imidlalo yabo emibili edlule yeNdebe ye-FA ibhekene neChelsea: 2-0 ngo-2002 no 2-1 ngo-2017.
Kodwa-ke, iChelsea inqobile neminye emiqhudelwaneni yayo emibili emiqhudelwaneni emikhulu, yahamba ngo-2-1 ku-2007 League Cup kwathi ngo-4-1 kwabonisa umdlalo we-Europa League wangonyaka odlule.
Ukunqoba kweChelsea kuphela lapho bashayisana neNdebe Yomhlaba eyisithupha edlule neGunners yafika kowamanqamu we-2009.
I-Arsenal ifinyelele kowamanqamu weNdebe ye-FA amahlandla angama-21 futhi ibuye yawina lo mncintiswano amahlandla awu-13 - ukwedlula noma yiliphi elinye iqembu. Baye babamba iqhaza ku-15% wayo yonke imiqhudelwano yeNdebe ye-FA.
AmaGunners awalahlekelwanga owamanqamu weNdebe ye-FA eWembley selokhu alahlekelwa yi-West Ham ngo-1 ngo-0.
I-Arsenal isiqede ngaphandle kwePremier League okuphezulu kweziyisithupha kule sizini okokuqala eminyakeni engama-25.
Bahlulekile ukuthola amaphuzu kunoma yimuphi umdlalo wabo wokugcina weNdebe ye-31.
Lokhu kungumdlalo wamanqamu weNdebe Yomhlaba ka-14 kaChelsea; yi-Arsenal kuphela (21) neManchester United (20) esezuze okuningi.
Balahlekelwe ngomdlalo wabo owodwa wokugcina weNdebe ye-15.
Selokhu adlala umdlalo wokuqala we-FA Cup ngo-2013, u-Olivier Giroud useshaye amagoli angama-16 kulo mncintiswano - ngemuva nje kukaSergio Aguero weManchester City.
Lo mFulentshi uhlose ukuba ngumdlali wesibili wokushaya namaqembu athile (i-Arsenal) kuma-fainali e -FA Cup ahlukene. UFrank Stapleton ushaye i-Arsenal ibambana neManchester United kowamanqamu ka-1979 kwathi lapho bebedlalela amaRed Devils kowamanqamu ngo-1983 bebhekene neBrighton.
Lo mbhalo uvele okokuqala ku: https://www.bbc.com/sport/football/53546100
Ukaputeni weCameroonia wase-Italia 90, uTataw uyafa